अनुहारको दाग तथा अनावश्यक रौँ हटाउने लेजर के हो? के कुरामा ध्यान दिने? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
अनुहारको दाग तथा अनावश्यक रौँ हटाउने लेजर के हो? के कुरामा ध्यान दिने?
कमला गुरुङ आइतबार, फागुन २९, २०७८, ०६:१०:००
काठमाडौं - अनुहारको दाग हटाउन तथा अनावश्यक रौँ फाल्न लेजर प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ। सुन्दर देखिन चाहने व्यक्तिका लागि लेजर विधि सहयोगी बनेको छ।
छाला पुनरुत्थान, पोलेका दाग हटाउने, जन्म दागहरु स्थायी रुपमा हटाउने तरिकामध्ये लेजर एक हो।
तर हतारमा र बिना सही जानकारी गरिएको लेजरले प्रभावकारी नतिजा दिँदैन। यो खर्चिलो प्रक्रिया हुने भएकाले आवश्यकता र योजना बनाएर मात्र लेजर सुरु गर्न छाला रोग विशेषज्ञ डा शुबेक्क्षा कार्की बताउँछिन्। डा कार्की दि स्कीन हेल्थ एण्ड रिफरल सेन्टर र दि स्कीन डक्टर्स क्लिनीकमा कार्यरत छिन्।
लेजर भनेको के हो? र कसरी गर्ने? यसका फाइदा र बेफाइदा बारे हामीले डा कार्कीसँग थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
लेजर भनेको के हो र यो किन गरिन्छ?
– लेजर एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो। जसले विद्युतीय माध्यमबाट परावैजनी किरण निकाल्छ।
– अनुहारमा भएका विभिन्न दाग तथा खतहरु, ट्याटु हटाउन र शरीरमा रहेका रौँहरु निकाल्न लेजर गरिन्छ।
– व्यक्तिको आवश्यकता र अवस्था अनुसार लेजर गर्न सकिन्छ।
लेजर कसरी गरिन्छ ?
– छालामा लेजर गर्दा वेभलेन्थ छालामा छिरेर भित्र जान्छ।
– तातोसँग काम गरिरहँदा केही न केही पिग्मेन्टेशन हुने जोखिम रहन्छ।
– बिरामीको छालाको रंग, अवस्था, उसले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरुको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ।
– कुनै व्यक्ति आउने बित्तिकै उनीहरुको लेजर गर्न मिल्दैन। सबै थाहा भएपछि मात्र लेजर गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।
नेपालीहरुको छालाको लागि लेजर प्रविधि उपयुक्त हो ?
– गोरोभन्दा गहुँ गोरो छालामा दाग हटाउन गरिएको लेजरले केही दाग पनि बस्न सक्छ।
– लेजरभन्दा अघि एक हप्ताअघि प्राइमिङ गर्न आवश्यक छ।
लेजर गर्नुको फाइदा र बेफाइदा के छन् ?
– लेजर रोगको लागि भन्दा पनि सुन्दर देखिन गरिने प्रविधि हो।
– लेजर गर्नुअघि आफ्नो आवश्यकता र योजना बनाएर मात्र गर्नुपर्छ।
लेजर सँधैका लागि हुन्छ की केही निश्चित समयको लागि मात्र हो ?
– ट्याटु हटाउनका लागि गरिएको लेजर सँधैका लागि हुन्छ।
– अनुहारको दाग र खत हटाउन गरिएको लेजरले शत प्रतिशत नतिजा दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन।
– अनावश्यक रौँ हटाउन लेजर गरिएपनि पुनः पलाए पछि ‘रि टचअप’ गर्न सकिन्छ।
कतिपयले लेजर गरेपछि पनि शरीरमा रौँ पुनः पलाएको गुनासो गर्छन्। यो किन हुन्छ ?
– कुनै बेला नबुझिकन र हतारमा गरिएको लेजरले पनि यो समस्या हुन सक्छ।
– हर्मोनको समस्याले पनि हुन सक्छ। उहाँले प्रयोग गरिरहेको क्रिमले पनि यो समस्या निम्त्याउन सक्छ।
– सबै प्रविधि बुझेर मात्र लेजर गर्दा खर्च अनुसारको फाइदा पनि हुन्छ।
लेजर गर्नुअघि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
– सँधै आफ्नो आवश्यकता र योजना अनुसार लेजर गर्नुपर्छ।
– एक दुई पटकमा गरिएको लेजरले नतिजा निकाल्छ भन्ने आशा गर्नु हुँदैन।
– चिकित्सकले भने अनुसारको सबै सेसन नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
– कुनै रोग भए/नभएको, गर्भवती र स्तनपान गराइरहेको महिलाले परामर्श गरेर मात्र लेजर सुरु गर्नुपर्छ।
अनुहारको दाग र रौँ हटाउन कति पटक/सेसनको लेजर गर्नुपर्छ ?
– अनुहारमा गरिने लेजर रौँको बनावट अनुसार पनि हुन्छ।
– एकदमै मसिनो र कैलौँ रंगको रौँ भएको अनुहारमा गरिएको लेजरको प्रभावकारी कम हुन सक्छ।
– बाक्लो र कालो रौँ भएको अनुहारमा राम्रो नतिजा आउँछ।
– लेजर एक÷डेढ महिनाको अन्तरालमा गरेर ६ सेसन गर्नुपर्छ।